WordPress: Antony 3 hametrahana Jetpack izao! | Martech Zone
Alarobia, Desambra 4, 2013 Alakamisy, Jolay 9, 2015 Douglas Karr
Omaly alina dia nahafaly ahy ny naha-vahiny tao amin'ny #atomicchat resaka Twitter tantanan'ny olona tsy mampino at Atomic Reach. Nifanakalo hevitra momba ny plugins tsara ho an'ny WordPress izahay ary ny plugin iray izay tsy maintsy nentiko imbetsaka dia Jetpack.
Jetpack dia manohana ny tranokalanao WordPress nampiantrano anao miaraka amin'ny herin'ny rahona mahatalanjona WordPress.com.
Azonao atao ny mitsidika ny Jetpack ho an'ny tranokala WordPress raha mila fanazavana fanampiny, saingy misy fiasa telo misongadina ho ahy:
Raha tsy mahay mamaky tsara ny tranokalanao amin'ny telefaona finday ianao dia maro amin'ireo mpitsidika anao no azo antoka fa mandoa vola anao. Ny vaovao tsara dia ny hoe tsy mila mandany vola iray taonina amin'ny lohahevitra mamaly vaovao ianao na fanampiana amin'ny finday, WordPress dia nitafy tamina lohahevitra finday iray maivana sy maivana ary mandeha tsara avy any anaty boaty ianao.
Raha nisy fitarainana nataoko dia mety tsy voatahiry ao anaty lahatahiry lohahevitra io lohahevitra io - ka raha manaova fanovana ianao dia hamafana azy ireo ny fanavaozana ilay plugin. Ho fanampin'izany, ny sehatra fampiharana finday toa ny iTunes dia manolotra angon-drakitra meta izay mipoitra bokotra fametrahana ho an'ny fampiharana tranokala. Ity dia singa iray lehibe ho an'ity plugin ity.
On Martech Zone, manana antso mavitrika amin'ny hetsika miorina amin'ny sokajy izahay. Raha mamaky lahatsoratra momba ny haino aman-jery sosialy ianao, ny sidebar dia mampiseho antso an-tserasera ho an'ny hetsika avy amin'ny mpamatsy vola. Tena niasa tsara izy io saingy nitaky ny fandaharantsika ny plugin manokana hanatanterahana azy. Tsy izay intsony! Jetpack tonga miaraka amin'ny fahitana safidy izay ahafahanao mametraka fitsipika sarotra amin'ny fotoana hanehoana widget manokana.
Tsy safidy intsony ny fampiroboroboana ny votoatinao, ilaina amin'ny paikady ankapobeny izany. Voavahan'ny WordPress io fanamby io tamin'ny fampidirana ny fahafaha-manaparitaka ny hafatrao amin'ny tambajotran-tserasera misy anao. Manantena ny hampiany Google+ aho ary azo inoana fa hanova ny bilaoginay manokana amin'ity plugin ity raha vantany vao ampiana. Mampiasa ny WordPress mankany Buffer plugin sy buffer hizara ny lahatsoratray.
Angamba manan-danja indrindra amin'ny Jetpack dia ny zanatany amin'ny WordPress ary namboarin'ireo mpamorona WordPress. Manome ny kalitaon'ny plugins marobe eny an-tsena, mahafinaritra ny manana an'io loharano azo itokisana io! hametraka Jetpack ankehitriny ary araraoty ireo fiasa ireo ary maro hafa!
Tags: Widget dinamikalohahevitra findayby MediaWikifahitanaWidgetplugin WordPress